नागरिक एपमा अझै दर्ता भएनन् बैतडीको पुर्चौडीका नागरिकका नागरिकता, हिउँद कुर्दै कर्मचारी ! - Dhangadhi Khabar
शुक्रबार ०१, असोज २०७८ ०३:४१
नागरिक एपमा अझै दर्ता भएनन् बैतडीको पुर्चौडीका नागरिकका नागरिकता, हिउँद कुर्दै कर्मचारी !
इन्टरनेटको असुविधाका कारण अनलाइन सेवा प्रणाली सञ्चालनमा समस्या
धनगढी । नेपाल सरकारले २०७७ माघ २ गते शुक्रवारबाट सरकारले प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवालाई सरल, पारदर्शी, छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन भन्दै नागरिक एप प्रयोगमा ल्याएको थियो ।
बुधबार १३, साउन २०७८ १०:४४ मा प्रकाशित
#नागरिक एप #बैतडी